Rugta Ganacsiga Soomaaliyeed oo ka hor timid kala diristii lagu saneeyay – Mareeg.com somalia, World News and Opinion.
Rugta ganacsiga Soomaaliyeed ayaa ka soo horjeesatay go’aan lagu kala diray hogaankooda oo ka soo baxay Wasiirka ganacsiga ee xukuumadda Federaalka Soomaaliya.
Agaasimaha guud ee Rugta ganacsiga Cabdi Abshir Dhoore ayaa sheegay in wasiirka ganacsiga uusan laheyn awood uu ku kala diri karo hogaankooda, isla markaana uu qaatay Go’aankii lagu kala diray Guddiga.
“Wasiirka Wasaarada ganacsiga ma kala diri karo Rugta ganacsiga, warqada uu soo saarayna ma ahan mid sharci ah’’ ayuu yiri agaasime Cabdi Abshir Dhoore oo Ra’iisul Wasaare Maxamed Xuseen Rooble ka dalbaday inuu soo fara geliyo arrintan.
Gudoomiye ku.xigeenka Rugta ganacsiga Cabdiraxmaan Cabdullaahi Aadan Galaanbi ayaa wax lala yaabo ku tilmaamay talaabada uu qaafay Wasiirka Ganacsiga oo uu tilmaamay in howlaha Rugta Ganacsiga la socon.
’’Hogaanka Rugta ganacsiga shan sano ayaa la doortay, warqada uu soo saaray wasiirka ganacsiga sharciga ayay baalmarsan tahay” ayuu yiri Cabdullaahi Aadan Galaanbi oo intaas ku daray in hogaanka rugta ganacsiga uu sidiisii caadiga aheyd u shaqeynayo, aysana dheg jalaq i siin doonin talaabada lagu kala diray.
Wareegto ka soo baxday Wasiirka Ganacsiga iyo Warshadaha Xukuumada federaalka Soomaaliya Xildhibaan Khaliif Cabdi Cumar ayaa lagu kala diray Hogaankii Rugta Ganacsiga iyo Warshadaha Soomaaliya.
Kala dirista Rugta Ganacsiga iyo Warshadaha Soomaaliya oo la ogeysiiyay Madaxweynaha Soomaaliya iyo Ra’iisul Wasaaraha ayaa lagu sheegay inay ku timid cakirnaan iyo dhibaatooyin kale oo soo wajahay ganacsatada Soomaaliya, waxaana la magacaabay hogaan KMG ah, inta laga dooranayo hogaan cusub.